I-AFG Pilatus PC 12
Umbuzo I-AFG Pilatus PC 12
unyaka 1 7 edlule #1038 by sruble
Ngabe kukhona noma yiziphi izinhlelo zokwakha i-AFG Pilatus PC 12 ye FSX/ SE? Ngithole okumbalwa kepha akufakwanga ukuthi bakwenze ukufaka FSX/ SE.
unyaka 1 7 edlule - unyaka 1 7 edlule #1039 by DRCW
Ingabe unayo i-boxed edition FSX? Noma uSteam? simivation.com inale modeli futhi ngayifaka ngaphakathi FSX ngaphandle kwezinkinga, Nasi esinye sivela ku-flyaway sekulingisa
Kwesinye isikhathi lokhu kulanda kungangeza ifolda eyengeziwe ezobangela FSX Ifolda yezindiza ukuthi ingafundi kahle ifayili. Ukugwema lokhu qinisekisa ukuthi kunefolda eyodwa kuphela enegama lendiza elikulo. Uma uvula ifolda, kufanele ikhombise ngqo, imodeli, iphaneli, i-CFG njll. Uma kufanele uvule amafolda amabili ukuze uthole lolu lwazi, FSX ngeke alifunde ifayela. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyokuchazela.
Lapho ulanda ifayela, kunokuba ulifake FSX Ifolda yezindiza .. Yikhiphe kukhompuyutha yakho. Kuzovela amafolda amathathu
flyawaysim ... ifayela doc
Iya kufayela le-Fly Away link.
Susa konke kodwa ifolda ye-PC-12X
Vula ifolda ye-PC-12X bese kuvela enye ifolda: AFGPC12X. Le yifolda oyofuna ukuyikopisha kweyakho FSX / ama-simobjects / Ifolda yezindiza. Qhafaza kwesokudla kufolda ye-AFGPC12X bese ukhetha ikhophi, bese unamathisela leyo folda kufolda yezindiza FSX... Kufanele kusebenze kahle!
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-7 ezedlule DRCW. Isizathu: Inqubo yokulanda ifayela
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: sruble
unyaka 1 7 edlule #1040 by sruble
Siyabonga, ngine-Steam Edition. Ngazama kokubili ukuhamba, & nokuhamba. ayikwazanga ukuthola eyodwa ukusebenza. Ngizozama izeluleko zakho. ngifisele inhlanhla.
unyaka 1 7 edlule #1041 by sruble
Ngiyabonga . Lokho kwakuyi-Magic Bullet Ngangifuna ..... Ngiyasebenza Okukhulu.Siyabonga :)
unyaka 1 7 edlule #1042 by DRCW
Isikhathi ukudala page: 0.185 imizuzwana